Madaxweyne bad-baadiyay labo gabdhood oo badda ku dhacay! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweyne bad-baadiyay labo gabdhood oo badda ku dhacay!
Madaxweyne bad-baadiyay labo gabdhood oo badda ku dhacay!
Portugal (Halqaran.com) – Madaxweynaha waddanka Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ayaa badbaadiyay labo haween ah oo dhibaato kula kulmau badweynta, kaddib markii ay la qallibantay doon yar oo ay saarnaayeen.
Marcelo Rebelo de Sousa, oo 71 jir ah, ayaa Sabtidii lasoo sawiray isagoo u dabaalanaya dhinaca doonta gabdhaha la qallibantay, xilli ay halis ugu jireen inay biyaha ku haftaan.
Markii dambe ayuu saxaafadda u sheegay in haweenkaas uu hir kasoo qaaday meel kale.
Madaxweyne Rebelo de Sousa ayaa hadda ku damaashaadaya gobolka Algarve, wuxuuna booqashooyin kala duwan ku marayay dalkaas, si uu u dhiirrigaliyo dadka dalxiiseyaasha ah.
Dhaqaalaha waddanka Portugal intiisa badan ayaa ku tiirsan dalxiiska, kaasoo uu saameyn ba’an ku yeeshay cudurka safmarka ah ee coronavirus.
Madaxweynaha ayaa xilli uu warfidiyeenka kula hadlayay xeebta Praia do Alvor indhaha ku dhuftay labada dumarka ah oo biyaha dhexdooda ku dhibaateysan.
Muuqaal ayaa laga soo duubay isagoo durbadiiba ku cararay badda, una dabaashay dhinaca haweenkaas dhibaateysnaa.
Nin kale ayaa uga sii horreeyay meeshaas, kaasoo isku dayay inuu gabadhaha badbaadiyo. Markii dambena qof saddexaad ayaa ugu tagay inuu caawiyo.
Qofka saddexaad ayey u suuragashay inuu doontii usoo jiido dhinaca xeebta.
Kaddib markii uu haweenka caawiyay, ayuu madaxweyne Rebelo de Sousa wariyeyaasha u sheegay inay ka imaadeen xeeb kale.
“Maadaama ay jiraan dabeylo aad u xooggan, waxaa laga soo leexiyay jihadii ay u socdeen, kaddib way la rogmatay doontii, biyihii ayaa durba laqay, awoodna uma aysan lahayn inay doontooda toosiyaan, ama dabaashaan,” ayuu ku yidhi warfidiyeenka.
Madaxweynaha ayaa sheegay in isaga qudhiisa uu caawinaad ka helay qofka saddexaad, oo qalab isticmaalayay, kaasoo uu ku tilmaamay “waddani”.
Wuxuu u digay haweenka, oo uu kula taliyay inay taxaddar badan muujiyaan.
Sida laga soo xigtay warbaahinta 20 Minutos, madaxweynaha ayaa gobollo dhowr ah booqanaya si uu dalxiiseyaasha kale u xiiso galiyo.
Portugal ayaan ku jirin liiska waddamada ay dowladda UK ka reebtay in karantiilka la galiyo dadka ka yimaada.
Waddankan ayaa caan ku ah inay dadka reer Britain dalxiis u doontaan, sanad walbana waxaa booqda in ka badan saddex milyan oo reer UK ah.
Dadka Britain u dhashay ee gobolka Algarve dalxiiska ku taga ayaa ka badan waddan kasta oo kale dadkiisa.
badda ku dhacay